Maitiro ekubvisa Android voicemail ziviso - Android Pop ▷ ➡️
Sei kubvisa voicemail ziviso?
Iwe unoda bvisa voicemail ziviso, inoonekwa pane Android kana uchigamuchira meseji yezwi, pano isu tinokuudza kuti ungabvisa sei ichi chiziviso.
Pasina kupokana, ichi chiziviso chinoda kutsamwisa zvishoma, asi iwe haufanire kunetseka nekuti nhasi tichakuudza kuti ungabvisa sei ziviso kubva kuvoicemail yako muna 2020.
Sei iyo voicemail ziviso isingaendi?
Dambudziko rinowanzo kuve rakajairika, ndosaka richikonzerwa, iyo Android voicemail ziviso inoonekwa mushure mekunge wagamuchira izwi rezwi muvoicemail yako. Nei iyo voicemail ziviso haizoenda Mushure mekunzwa iyi meseji, dzimwe nguva ichi chiziviso hachiwanzo kutsakatika.
Kana iwe usiri kuda kunzwa iyo meseji asi iwe uchida bvisa voicemail ziviso pa Android. Isu tinokuratidza nzira kuti iwe ugone kuziva maitiro ekuita izvi.
Maitiro ekubvisa voicemail ziviso pane Android
Kuchenesa voicemail ziviso pane dzimwe nzira imwe neimwe dzakasiyana kubva kune imwe, ikozvino tichakuratidza nzira inozivikanwa kwazvo dzima voicemail ziviso.
Kana fomu iri risingashande kwauri, yeuka kuti isu tinokusiira iwe mamwe maviri kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa dambudziko rako.
Kuti uwane bvisa voicemail ziviso de Telcel isu tinofanirwa kutevedzera aya matanho ari nyore.
Isu hatiende kumisikidza application yeApple yako.
Isu tinovhura chikamu chekushandisa.
Isu tinotsvaga iyo application inonzi Telephone (Kana ukasakwanisa kuiwana, unogona kutsvaga mumaapplication sisitimu kana kuenda kumenyu yako yekushandisa, tinya kwenguva, tinya pane rumwe ruzivo uye ndizvozvo).
Kuti tivhiringidze voicemail ziviso kunyangarika isu tinofanirwa kubaya pane bhatani rakanzi simba mira (Izvi zvinomisa application)
Kana iyo yekutanga nzira isingakwanise kukubatsira kugadzirisa dambudziko rako, usanetseka pano ini ndinokusiira iwe nzira yechipiri yekumisa voicemail ziviso.
Kuti uwane bvisa voicemail zivisoTinofanirwa kuita nhanho dzakafanana mufomu 1. Zvino hatichabatise bhatani rekumisa, hatisi kuenda kuchikamu chekuchengetedza, kana uchinge uri muchikamu ichi unofanirwa kubaya pabhatani rinoti "Delete Data".
Izvi hazvibvise nhoroondo yako yekufona, kana vako vaunofambidzana navo, chete ma ziviso ane ichi chishandiso, saka hapana chekutya nazvo.
Kana form 2 haina kukubatsirawo bvisa voicemail ziviso, isu tinokusiya iwe kune yechitatu uye yekupedzisira nzira yekumisa voicemail ziviso.
Nzira mbiri dzekutanga dzekudzima kuziviswa kweiyo voicemail, haibvise ziviso zvachose, nekuti izvi unofanirwa kuteerera kune iro izwi meseji.
Nenzira iyi vazhinji vachatozviziva sezvo iri iyo inonyanya kushandiswa mune aya marudzi emakesi. Iyo ndiyo yakapusa nzira yekugadzirisa dambudziko rako.
Kugona kutsakatika ziviso zvachose iwe unofanirwa kuteerera kune iro izwi meseji rakatumirwa kwauri uye bvisa kubva kuvoicemail yako.
Ndinovimba ichi chinyorwa chakubatsira iwe kugadzirisa yako dambudziko kana mubvunzo. Rangarira kugovera chinyorwa pane ako masocial network kuitira kuti usvike kune vanhu vazhinji.
Adriana lara muna Nyamavhuvhu 8, 2020
Tsananguro yakanaka yekubvisa voicemail
Carlos perez muna Nyamavhuvhu 13, 2020
Izvi zvinoshanda kudzima voelmeil yaTelcel
Kana iwe uchigona kumisa chiziviso chevoicemail yeTelcel neMovistar
Http Injector Telcel maseva 2021 ine uye isina chikwereti
Yemahara Internet 2021